Qaab Fudud Oo Cajiib ah Oo Aad Ku Ogaan Karto Beenaalayaasha | Xaqiiqonews
Qaab Fudud Oo Cajiib ah Oo Aad Ku Ogaan Karto Beenaalayaasha
Soomaalida ayaa tiraahda “Beeni raad maleh” , dadkii hore ayaa lahaa xirfado iyo qaabab ay ku ogaadaan qofka u sheegeynaya iyo dhabnimada waxa uu sheegayo.
Maanta, Iyadoo garab laga helaayo Culimada Nafsiga, kuwa barta Bulshada iyo Luuqadda, waxaa fududaaday in la ogaado beenaalaha.
Bogga Waxbarashada Website-ka Ameerikaaka ah ee “WikiHow” ayaa baahiyey mowduuc ka sheekeynaya afar meel oo lagu ogaan karo beenaalaha.
In beentiisa laga ogaado Wajiga iyo Indhaha
In beenta laga ogaado Luuqadda uu isticmaalayo
In Beenta laga ogaado luuqadda jirka”Body Language.
In beenta Laga ogaado, suaala dagan oo la weydiiyo
Diraasad kale oo uu baahiyey Website-ka “Psychology Today” ayaa soo bandhigtay qaabab aad ku kashifi karto qofka been kuu sheegaya. waxaana ka mid ah.
Sidoo Kale Aqriso: dadka-ka-baro-beenaalaha-calaamadaha-lagu-karto-qofka-been-kuu-sheegaayo
*Weydii qofka aad ka shakisay su’aalo adiga oo hadalka ka kala jaraayo, tusaale weydii “Jawiga maanta sidee buu ahaa” , jirkiisa wax isbadal ah ma sameeyey? waxaa dhici karta in jawaabta su’aashaada uu ku dareemo raaxo, so kuma arkin isbadal, ka waran sida indhahiisa ay ahaayeen markii uu kaga sheegeynayey qiso ku saabsan geesinmadiisa iyo dagaal uu soo galay, iyo hadda aad weydiisay su’uul fudud.
*Ka dib Sheekada ku soo laabo, ku dheh “Halkee sheekada noo mareysay? fiiri waxa uu sameeynaayo, ogow beenaalaha ma fiiriyo indhaha qofka uu u sheegeynaayo, balse tani ma ahan xeer kama dambeysa ah.
*Ku baraarugsanow erayada uu isticmaalaayo, waxaa uu iska dayaa in uu isticmaalo erayp adag si uu kaga dhaadhaaciyo waxa aan jirin oo gacan ku sameys ah.
*Dadka qaar marka ay been sheegayaan waxa ay isku dayaan in ay sheekada kaga dhigaan waxa ay meel ka soo maqleen ama ay daawadeen, Waxaa muhiim ah qofka in uu la socdaa meelaha ay tahay in fiirada gaarka ah loo yeesho.